May Nyane: အလွမ်းပြေ...
ဆရာမရေ.. ကဗျာလေးတွေ ကောင်းလိုက်တာ။ ခံစားလို့ ရနေခဲ့တယ်။
ဆရာမ လက်ရေးလှလှနဲ့ ကဗျာလေးတွေက တကယ်ကိုပဲ အလွမ်းပြေစေပါတယ်
ပုံတူ ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကို ပိုကြိုက်တယ်...း))
အသစ်မရေးနိုင်ချိန် အဟောင်းလေးတွေ တင်ပေါ့။ အဲလို တင်ရင်းနဲ့ ရေးချင်စိတ် ပေါက်လာလိမ့်မယ်။ ဒီ အဟောင်း ၂ ပုဒ်ကို ကြည့်ပြီး အဲဒီတုန်းက "ငါ ဘယ်လိုများရေးခဲ့ပါလိမ့်" .. လို့ မထင်မိဘူးလား။ တချို့ ကဗျာအဟောင်းတွေ ပြန်ဖတ်မိရင် ကျွန်တော်တော့ အဲဒီလို တွေးမိတယ်။ (ကောင်းတာ မကောင်းတာထက် တချိန်က ခံစားမှု၊ တချိန်က အတွေးကို ပြန်သတိရလို့၊ ခုနေ ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးလေ။ ရေလိုပဲ စီးသွားပြီ။)
Portrait ဆိုတာတွေ့တော့ တီချယ်ကြီး ကဗျာခေါင်းစဉ်ကို အင်္ဂလိပ်လို တပ်လေ့ရှိတာ သတိရမိတယ်။
'အချစ်' ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကြိုက်တယ် ဆရာမး)
အဲဒီကဗျာလေးက ကျွန်တော် သိပ်ကြိုက်တဲ့ကဗျာလေးပါ ဆရာမရေ..
“ပုံတူ” ကဗျာလေးက ခုမှ ဖတ်ဖူးတာ...
အလွမ်းပြေ ဖတ်ရင်း ပိုလွမ်းနေသလိုလို....
I like "Portrait" too. I especially love your hand writing. Nowadays it's hard to see any hand writing.
I like ur poem sayarma.
"When we ran," I like this poem best.Sorry for my unconvience. I have not burmese font now. If u remember or get this poem back,please publish it in ur post. It is my rememberance and still like and recipe it.
ဆရာမ စာလေးတွေ အလွမ်းပြေဖတ်ရတဲ့ အတွက်လည်း အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာမ။
တို့ ထည့်မတွက်ထား ခဲ့မိမှားပေါ့...” ...
တပိုင်းတစ ကျနော်သတိရနေမိတာလေးတွေပါ။ အဲဒါလေးတွေလဲ ဆရာမရေးခဲ့တာပဲ ထင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ဟုတ်ခဲ့ရင် အပြည့်အစုံ ပြန်ဖတ်ပါရစေ။